यस्ता चार विशेषता भएका व्यक्तिहरू हुन्छन् असाध्यै भाग्यमानी - तपाई पर्नुभयो कि ? हेर्नुहोस - hamrosandesh.com – hamrosandesh.com
यस्ता चार विशेषता भएका व्यक्तिहरू हुन्छन् असाध्यै भाग्यमानी – तपाई पर्नुभयो कि ? हेर्नुहोस
यस्ता चार विशेषता भएका व्यक्तिहरू हुन्छन् असाध्यै भाग्यमानी ( तपाई पर्नुभयो कि ? हेर्नुहोस ) फरक फरक मानिस अनुसार हाम्रो शरीरको बनावट पनि फरक फरक हुन्छ । फरक फरक शरीरको बनावट र सङ्केतले व्यक्तिको विशेषता पनि बताइरहेको हुन्छ । विशेष गरी त समुन्द्र शास्त्रले यस्ता कुराहरूको विशेषता बताइरहेको हुन्छ । शास्त्रका अनुसार हाम्रो मानव शरीरमा भएका यस्ता सङ्केतहरूले हाम्रो बारेमा यी यस्ता कुराहरू बताउँछन् ।
१. दाँतमाथि दाँत खप्टिनुः समुद्रशास्त्रका अनुसार जुन व्यक्तिको दाँतमाथि दाँत खप्टिएको हुन्छ उनीहरु भाग्यमानी हुन्छन् । यसका साथै यस्ता व्यक्ति असल र मित्रहरुलाई सधैँ साथ दिने खालका हुन्छन् । यस्ता व्यक्तिहरु आफ्नो भाग्यको साथले नै अघि बढेका हुन्छन् ।
२. छवटा औँलाः सामान्यतः हरेक मान्छेको हात र खुट्टामा पाँच–पाँच वटा औँला हुन्छन् । तर संसारमा यस्ता मान्छे पनि हुन्छन् जसको कुनै हात वा खुट्टामा ६ वटा औँला हुन्छ । ६ वटा औँला भएका मानिस अत्यन्तै भाग्यमानी हुन्छन् भन्ने कुरा समुन्द्रशास्त्रमा उल्लेख गरिएको छ । यस्ता व्यक्ति अत्यन्तै इमान्दार र हरेक कामलाई आफ्नो कामको रुपमा ग्रहण गर्छन् । यस्तै यिनीहरुले आफ्नो कामबाट प्रसिद्धि पनि कमाउँछन् ।
३.दाँतको बीच खाली ठाउँः दाँतको बीचमा खाली ठाउँ भएका व्यक्तिहरु आर्थिक क्षेत्रका विषयमा निर्णय लिन निक्कै सक्षम हुन्छन् । समुद्रशास्त्रअनुसार यस्ता व्यक्तिहरु गफाडी पनि हुन्छन् । र कुरा बनाउन कहिल्यै पनि थाक्दैनन् । यस्ता व्यक्तिहरु भाग्यशाली हुन्छन् । भनिन्छ कि जसको अगाडिको दाँत बीचमा खाली ठाउँ हुन्छ, त्यस्ता व्यक्तिहरु पैसादेखि लिएर करिअरसम्मको कुरामा निकै नै भाग्यशाली हुन्छन् ।
४.पुरुषको छातीमा रौँः यस्ता पुरुषहरु शान्त र सरल स्वभावका हुन्छन् । छातीमा रौँ भएका पुरुष धनाढ्य पनि हुन्छन् । जसले गर्दा यिनीहरुको जीवनमा कहिल्यै धनको कमी हुँदैन ।